Toeram-pandehan'ny siansa fisakafoanana misy poizina
Mihevitra ve ianao fa azo atao ny manamboatra pizza mangatsiatsiaka eny ambonin'ny lavaka? Andao hizaha sy hizaha !. Anne Helmenstine
Tianao ve ny hanao fanandramana momba ny siansa mahafinaritra sy azo hanina? Andeha hojerentsika raha afaka manamboatra pizza mangatsiaka ianao ao anaty lavaka. Ity dia tetik'asa siantifika fampiharana izay hitondra vokatra tsara ho an'ny pizza iray simba na fanafody mahafatifaty!
Ampiharo ny fomba siantifika mba hiomanana sakafo
Azonao ampiharina amin'ny fomba mahasoa ny fomba siantifika , fa tsy amin'ny fanandramana fotsiny ao amin'ny laboratoara. Ireto ny dingana manaraka amin'ny fomba siantifika:
Mamolavola ny fisainana .
Manorà fanandramana mba hitsapana ny fisainana.
Ataovy ilay fanandramana.
Diniho ny angon-drakitra ary hamarino raha tsy manaiky ny fitsiriritanao ianao.
Raha tsy efa niompinao teo aloha ianao, dia mety ho nanao fanamarihana sasantsasany momba ny fisotroan-drononon'ny pizza ianao ary mety hanana hevitra mikasika ny mety ho azonao ahafahana manamboatra pizza toy izany ao anaty lafaona fa tsy ao anaty lafaoro. Ohatra, mety ho hitanao fa tsy misy ao amin'ny fonosana pizza voapoizina ireo tari-dàlana mahandro sakafo. Ahoana ny hevitrao? Ankoatra izany, manana traikefa mahandro sakafo ianao ao amin'ny fatana. Matetika ianao no mahandro menaka, rano na rano hafa. Inona no azonao antenaina, raha manasitrana singa maina ao anaty vilany ianao? Inona ny fahasamihafana hitanao amin'ny sakafo voatsabo rehefa voasaron-tava eo amin'ny tendron'ny fatana raha oharina amin'ny sakafo tsy voatsabo? Misy sanda maromaro voapoizina ve no toa mahalana kokoa ny mihinana tsara ao amin'ny fatana?
Azonao atao ny mihevitra fa tsy afaka manamboara pizza mangatsiaka ianao ao anaty lavaka fantsakana, fa raha ratsy kosa ny sakafo, dia mety ho simba ny pizza na dia misy "chef" hafa aza afaka mamolavola pizza mendrika. Noho izany, raha manohana io fitsapana io ny fanandramanao dia tsy manaporofo izany fa tsy azo atao ny manadio pizza ao amin'ny fatana. Io vokatra io dia manohana fotsiny ny fisainana.
Amin'ny lafiny iray, raha toa ianao ka mihevitra fa azo atao ny manamboatra pizza mangatsiaka ao anaty fatana ary mahomby amin'ny fikarakarana pizza izay ahafahanao mitsangana mihinana, heverinao fa manaporofo izany ny toetranao? Raha manimba ny pizza ianao, moa ve izany no manala io fisainana io?
Araka ny azonao eritreretina dia tena zava-tsarotra ny fanandramana fanandramana! Ny fahombiazana dia raha mametraka pizza mangatsiaka ianao ao anaty fonosana, mametraka izany eo amin'ny fatana ary manasitrana ny hafanana mankany ambony, ianao dia manana onjam-peo antso an-tànana fa tsy sakafo hariva ho an'ny roa. Inona no mety hanatsara ny fahasalamanao?
Ahoana ny fomba fisokafantsika sakafo mafana ao amin'ny lavaka fantson-tsakafo
Apetraho ao anaty kitapo ny pizza mangatsiaka ary esoriny amin'ny takelaka iray. Anne Helmenstine
Maro ny siansa tonga momba ny olona iray izay mila tanjona. Raha ny marina, izaho no noana, nanana pizza mangatsiaka, saingy tsy nanana oven. Nanana koveta sy fitaovam-pisakafoanana fototra aho.
Hitako be dia be, pizza maro no voatsabo tao anaty tavin-tsakafo ary efa nanandrana ny mikraoba kely vitsivitsy tany aloha aho. Fantatro fa te-hivoatra loatra ny mari-pahaizana mba hahazoana voankazo maranitra, kanefa raha toa aho ka nanamaivana haingana ny faritra ambany indrindra amin'ny vatako dia afaka manantena aho fa hahatratra ny fako sy mahatsiravina ao anaty foibe ary ny fako matevina. Raha mbola teo am-pisakafoanana ny tora-pasika, dia nieritreritra aho fa ny fandrakofam-panamboarana dia mety hitifitra amin'ny hafanana mba hanampy ny hafanana ny pizza, kanefa mety hitifitra amin'ny fahamiramirana izay mety hahatonga ny pizza ho malefaka. Ny fandinihana hafa dia nahatonga ahy hieritreritra fa ny fikorotanana na ny fihinanana ny pizza dia drafitra ratsy.
Ny fitrandrahana tsy misy dikany dia:
Tsy afaka manamboara pizza mangatsiaka ianao eo amin'ny tampon'ny fatana.
Noho izany, ny pizza voapoizina rehetra izay mahomby amin'ny fomba mahomby dia manala ny fisainana.
Amin'ny lafiny iray, raha toa ianao ka nihevitra fa azo atao ny manamboatra pizza ao anaty fatana izay ahafahanao manangona angona mba hanohanana ny fitsapana, saingy ny fanimbana ny pizza dia tsy manakana ny fisainana. Mety midika fotsiny hoe mahandro ianao!
Izao no nataoko:
Esory pizza mafana amin'ny boaty.
Niezaka nametraka ilay pizza tao anaty fanatodizany aho, saingy efa be loatra ny fonosana ka novakiko tamin'ny tanako izany.
Nasiako pizza kely tao anaty vilany, navadika ny fatana (ny fisainana dia mety hanampy amin'ny famoahana ny pizza izany fa tsy mandoro azy io) ary mandrakotra ny pan (manandrana mandona hafanana). Ny tanjoko dia ny tsy hanomboka afo raha mihinana ny pizza ampy fa tsy manify sy mena ny crust.
Toa tsikelikely izany, noho izany dia nampitombo ny hafanana ho an'ny fampahalalam-baovao. Ny mpahay siansa tsara dia nanamarika hoe firy no nahandroako ny pizza ary mety ho navoakako ny fanamarihana momba ny hafanana sy ny toetran'ny pizza.
Vantany vao nipoitra ilay crust, dia naviliko ny hafanana. Tsy nesoriko teo ambony fandoroana ny fanala ary tsy nesoriko ilay ravina. Ny tanjoko dia ny hameno ny fihinanana ny crust sy hamonoana ny sakafo.
Rehefa afaka minitra vitsivitsy dia nametraka pizza teo amin'ny takelaka aho ary nanombantombana ny vokatro.
Pizza Stopped - Voatahiry
Ireto ny zavatra azonao raha manamboatra pizza mipetaka eo ambony lavaka fanala. Anne Helmenstine
Ity ny zavatra andrasana rehefa manamboara pizza mangatsiaka ianao eo amin'ny tampon'ny fatana, amin'ny fampiasana ny "teknikan'ny fanandramana".
Kitrokely, voatsodrano ambany amin'ny vatany.
Chewy, afovoan-tsakafo sy ampahany ambony amin'ny vatany.
Pizza mafana amin'ny fofom-baraka voasesika.
Raha fintinina dia heveriko ho toy ny pizza miteraka lozabe izany, mety mbola tsara kokoa noho ny nahazoako azy no efa nomaniko tao anaty lafaoro, na dia tsy notapahana aza ny chef (izay tiako). Na izany aza, azoko antoka fa afaka mahita lavaka ianao amin'ny fomba fanandramako, izay mety ho sarotra ny mamerina ny valiny. Tokony haka fanazavana bebe kokoa aho, mba hamaritana raha toa ity pizza ity dia mampiavaka ny zavatra azoko antenaina ato amin'ity tetikasa ity.
Raha toa ny fijeriko fa tsy azo atao ny manamboara pizza mangatsiaka ao amin'ny takelaka fanenitra, dia handà io fisainana io aho. Raha ny marina, afaka mahazo pizza tsara tarehy tsara ianao!
Manana pizza mofomamy mena aho. Inona no heverinao fa hitranga raha mampiasa marika na karazana pizza aho? Inona no fahasamihafana mety ho azoko raha toa ka nanaparitaka ny pizza ho an'ny efitra fisakafoana aho alohan'ny hanamboarana azy?
Heverinao ve fa zava-dehibe ny karazana panako efa nahazatra ahy niaro ny pizza? Ho tsara ve izany eo amin'ny fatana entona?
Fihetseham-po ara-tsiantifika: Ny sakafo sy ny fikarakarana sakafo
Ahoana no fanaovana Sorbet Inbet ao amin'ny Baggie
Fikarohana momba ny Chemistry
Fihetsiketseham-panafahana amin'ny Leidenfrost
Ny tetikasa tetikasa Fair Fair Science Fair
Ahoana ny fomba hahazoana an'i Rochelle sira
Fikirakirana haingana Kristiana
Manafoana ny styrofoam amin'ny Acetone
Ahoana no Hialanao Amin'ny Ranomasina?
Ampahafantaro ny Mixture tsy fantatra
African American Holders - MN
Fiverenan'ny taxa miverina avy amin'ny masoivohom-bola Canada
Cat Pictures: The Small Cats
Ady Lehibe I / II: USS Texas (BB-35)
Frank Carroll Figure Skating Coach
Top Resaka mivantana amin'ny teny frantsay
Lehibe Crane, Family Tipulidae
Ny anaran'ny ADAMS sy ny tantaram-pianakaviana
Sao dia mividy fiaramanidina gilasy ho an'ny tarehy?
Rollins College GPA, SAT sy ACT Data
Tafita avy amin'i William Howard Taft
Inona no fihinan'ny Libellés adult sy tsy maotina?
Ahoana ny fomba hifampiresahana "Adorer" (adore)
Fampiasana Torin-koditra Mamoaka ny fametahana bolts
Nanao fahadisoana ny mpandahateny Espaniôla fahiny
Ahoana ny fomba handaminana ny fifaninanana Golf Scramble Golf
Essential Essential Amino Acid
Torohevitra mba haka sary an-tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny "Magnetic Old" Photo Albums
Ny median-taona Amerikana avo indrindra hatramin'izay
Peigner - handevona
Fomba ahoana no hamahana ny fialana an-tsokosoko anao?
Tsara ve ny Mampiasa Lakozia Ho An'ny Art?
Regina Belle's Ten Greatest Hits
Famaritana fehintsoratra sy foto-kevitra famaritana